Tsy azon'ny vahiny mpampita vaovao ny fizotran'ny toe-draharaha | Hevitra MPANOHARIANA |
2018-04-22 @ 01:20 in Politika
...Na inian-dry zareo tsy soratana ny vaikan'ilay nahazo ny kianja manoloana ny Lapan'ny Tanànan'Antananarivo (13 mey 1972) eo anatrehan'ny Malagasy, tononina manokana ireo nanao ny fitolomana teny amin'io kianja io. Izay mahazo na mifehy io toerana io no mahazo ny lakaben'ny fanorona mora ahazoana indrindra ny fahefana eto Madagasikara, na fiandohan'ny faharavan'ny fitondrana nitana ny fahefana. Izay ilay antsoina hoe mivadika ny rasa.
Volana maro na vitsy izay teto Madagasikara, izay manohana ny fitondrana ihany no afa-mamory olona araka izay tiany. Raha ny hafa no manao izany dia sarotra dia sarotra ho an'izany olona izany ny hanangona olona am-pilaminana. Nanomboka ny 21 avrily 2018 kosa, noho ny fanentanana tamin'ny haino aman-jery, nihamaro ny olona sahy niatrika ny mpitandro ny filaminana sy ny fandravana fivorivorian'olona. Fotoana fohy mialoha ny heverina ho fanombohan'ny tatitra hataon'ny depiote amin'ireo vahoaka nifidy azy, fika iray nentina namoriana ny olona ho eto Antananarivo nefa hita mazava eo anatrehan'ny rehetra fa fanomanana fihetsiketseham-panoherana izany na tsy lazaina mivantana aza, nanomboka sahady ny fandefasana ny baomba mandatsa-dranomaso teo Analakely sy ny manodidina azy. Efa marika sahady izany fa maro tsy tahaka ny mahazatra (nandritra ny fitondran'ny filoha Rajaonarimampianina) ny olona tonga haneho ny tsy fahafaliany.
Zavatra iray hafa voamarika, saika mari-potoana ihany koa ny depiote niainga avy ao amin'ny tranon'ny kaominina iray etsy Ambohijatovo natao ho fonenan'izay Ben'ny Tanànan'Antananarivo Renivohitra, araka ny fahafantarako azy, hamonjy ny toerana voatondro, saingy efa niandry teo akaiky teo ihany koa ny Emmo hanakana azy ireo. Heverina fa niara-nivavaka tamin'ny mpiandry vitsivitsy ry zareo mialoha ny hizorana ho any Analakely raha ny fanombanana. Mihazakazaka ny ho lohalaharana ireo depioten'Antananarivo ireo raha ny fijery azy, noho ny sao dia ilazàna hoe miafina ambadiky ny olona ve? Angamba noho ny fihazakazahana hoe iza no tonga aloha eo amin'ny toerana kendrena hahatongavana.
Raha niompana be dia be tamin'izay fandravana ny fihetsiketsehan'ny olona izay ny tati-baovaon'ireo gazety sy haino aman-jery vahiny, ny mason'ny Malagasy mpanara-baovao kosa mitodika any amin'ny hoe azo ve sa tsy azo ny kianjan'ny 13 mey... ny tokotanin'ny Lapan'ny Tanàna no marina kokoa. Raha ny hitady ny isan'ny maty sy ny maratra no mahamaika ny gazety na mpanara-baovao, tsy dia mahaliana loatra izay nandray anjara tamin'ny fitokonana izany rehefa tratra ny tanjona. Mihevitra ny mpitolona avy eo fa efa azony sahady ny fandresena na dia nisy aza izany maty sy maratra izany.
Raha manao fihetsiketsehana izany ny Malagasy eto Antananarivo, tsy ny midina eny an'arabe hanehoam-pahatezerana no maika fa ny handrombaka ilay fahefana araka ny lalaon'ny Malagasy hatramin'ny taona 1972 teo amin'io toerana io.
Tahaka ny fihetseham-po fandrenesan'ny vahoaka amin'ny firenena iray ny hiram-pireneny redonina mandritra ny fanolorana medailin'ny lalao olaimpika, na fahitan'ny vahoaka iray ny sainam-pireneny mitsatoka voalohany sy avo indrindra amin'ny toerana iray no fihetseham-pon'ny Malagasy raha naharesy tosika ny mpitandro ny filaminana nanemitra ny toerana ry zareo ka afa-mijoro sy mipetraka ary mitsinjaka sy mihiaka. Tsy tokony atao mahagaga, noho izany, raha naharitraritra ihany ny horakoraky ny olona teo amin'io toerana io rehefa azon-dry zareo ny sehatra. Tsy tokony atao mahagaga ihany koa raha tsy manao na inona na inona intsony ny mpitandro ny filaminana raha vao mby eo amin'io toerana io ny maro an'isa satria izay ilay ao an-tsaina. Tsy tokony atao mahagaga raha miantso ny hanaovana fifampiresahana amin'izay ny eo amin'ny fitondrana satria efa very ny hasiny, saingy efa tara loatra izany ho an'ny maro, tara loatra ny antso avy amin'ny praiminisitra sy ny filohan'ny antenimieran-doholona.
Hafahafa noho izany ny mahita fampahalalam-baovao na malagasy na vahiny raha mampiseho ny sarin'ny fihetsiketsehana ka tsy mamoaka sy mitatitra ny fahazoana na tsia ilay kianja manan-tantara sy ivon'ny hasin'ny politikan'i Madagasikara. Manomboka izao: an-dalan'ny (mahita ny) famadihana ny pejin'ny tantaran'i Madagasikara indray isika.